Uyichonga njani i-Diastereomers yeMolekyuli
Xa ngaphezulu kweziko elinye le-chiral likho kwimolekyuli, unokuba nethuba lokuba ne-stereoisomers ezingazifanisiyo imifanekiso yomnye nomnye. Ezi stereoisomers ezingezizo ezesipili ziyabizwa Isitshisi .
Ngokwesiqhelo, unokuba ne-diastereomers kuphela xa imolekyuli inamaziko amabini okanye nangaphezulu.
Elona nani liphezulu lee-stereoisomers ezinokubakho kwimolekyuli ngumsebenzi we-2 n , phi n linani lamaziko e-chiral kwimolekyuli. Ke ngoko, imolekyuli enamaziko amahlanu e-chiral inokufikelela kwi-25okanye ama-stereoisomers angama-32! Njengoko inani lamaziko e-chiral lonyuka, inani lezinto ezinokubakho zestereoisomers zelo qela zanda ngokukhawuleza.
Umzekelo, imolekyuli eboniswe apha inamaziko amabini esiral.
Imolekyuli enamaziko amabini e-chiral.
Ngenxa yokuba le molekyuli inamaziko amabini e-chiral, inokuba ne-2 iyonkeMbini, okanye ezi-4, ezinokuba zizitiriyo ezinokubakho, inye kuphela eya kuba sisithambisi semolekyuli yoqobo.
Iziqinisekiso zi stereoisomers eziyimifanekiso yesipili yomnye nomnye.
Kuba omabini amaziko e-chiral kule molekyuli ngawokucwangciswa kwe-R, i-enantiomer yale molekyuli iya kuba noqwalaselo lwe-S kuwo omabini amaziko e-chiral. Zonke ii-stereoisomers zale molekyuli zibonisiwe kumzobo olandelayo. Ezi iimolekyuli ezingezizo i-enantiomers zomnye nomnye ziimpawu zediastereom enye nenye.
Ii-stereoisomers ezine zemolekyuli enamaziko amabini e-chiral.
iziphumo ebezingalindelekanga eziphindiweyo
isebenza njani venmo?
Ungayibonisa njani igraf polar equations
lihlala ixesha elingakanani i-cor 135
elinye igama levothyroxine
lisetyenziselwa ntoni iyeza tamsulosin